Jasmine : July 2011
Posted by စံပယ်ချို | Friday, July 29, 2011
ဒီဇင်ဘာ လရဲ့ ညတည
အလွမ်းတွေကို ခေါက်သိမ်းလို့ရ ရင်
မစူးမစမ်း ရူးနှမ်းနှမ်းလဲ မဟုတ်ပဲ
နှစ်လ ရှည်ကြာ အဖြေရှာဘယ်မှာမတွေ့
Posted by စံပယ်ချို | Tuesday, July 26, 2011
ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှု မရှိတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်ဟာ
မင်းရေးတဲ့ စာ တရားသဘောဆောင်ပေမယ့်
လက်တွေ့ မင်းဘ၀ အမှားတွေပဲ လုပ်နေတာ
ကိုယ့်ကို ကိုယ်သိပြီး ရင်ထဲထိရင်တော့ ကောင်းသား။
အဲလိုဖြစ်မှ မင်းဘ၀ ပျော်ရွှင်မှာလား။
အချစ် စစ်စစ်ကို မခံစားတတ်သူ မင်းအတွက်
ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်လဲ ခိုင်မြဲမှု ရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်
ဘ၀ ကိုရေစုန်မျောတဲ့ သူ
ဘယ်အရာမှ ဂတိသစ္စာ မရှိသူ
ဖုတ်ဖက်ခါ ထသွားပြီး လမ်းခွဲကြ
Posted by စံပယ်ချို | Saturday, July 23, 2011
ဘ၀တိုတိုထဲ ချစ်ရတဲ့ မင်းဆီက
အကြင်နာ တရားတွေ ချပြမရ
ဖြစ်လာတဲ့ ကံကြမ္မာ ခါးခါးတွေ အတွက်
ဘ၀ကို ပျားရည်ရော လို့ရမလား
အဖြူရောင် စစ်စစ်ငါ့ နှလုံးသား
အဖြေ ငါမသိ......ငြိတာက ရင်ထဲထိ
အကြင်နာ တရား ဆွဲချွတ်ခံရ
ခဏ ခဏ လဲကျ ခဲ့ရတဲ့ဘ၀။
ရှပ်ထိတဲ့ ဒဏ်ရာ မဟုတ်ဘူး
ကြယ်တွေ အများကြီး ကြွေခဲ့တဲ့ ည။
Posted by စံပယ်ချို | Tuesday, July 19, 2011
ငါ့အသဲ လမ်းခင်းပေးဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး
မင်းပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကား ။
ငါလက်ခံခဲ့တဲ့ အပိုင်း ။
မျက်ရည်တွေ အချိန်ပြည့် စိုထိုင်းခဲ့
ကောင်းကင်တစ်ခွင် ညိုမှိုင်းနေတဲ့ ရာသီ
ပတ်ဝန်းကျင် အားလုံး စုတ်ပြတ်သတ်သွားအောင်
စကြာဝဠာကြီးထဲ နေရာအနှံ့ ။
ကြိုးစားမှု တွေလဲ များခဲ့ပေမယ်
ကံတရားက ဘက်လိုက်မူဝါဒ ကျင့်သုံးတော့
၀ဋ် ကိုသာ အပြစ်တွေပုံချ
ရောက်ရာ အခန်းက ကပြခဲ့ ရတာပေါ့ ။
ဆောင့်ကြီး အောင့်ကြီး ပြန်ထွက်ပြေး
အရေးနိမ့်ခဲ့ရ အငြိုးအတေးက ဘာမှ မရှိ ။
တားမယ့်သူမရှိ ခါးသီးရတဲ့ အချစ်တွေအတွက်
ချစ်ခွင့်ရှိသမျှ ဆက်ချစ်မှာပါ ။
Posted by စံပယ်ချို | Saturday, July 16, 2011
ရအောင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးတွေတင်ပေးတာပါ...
ကွန်ပြူတာနဲ့ အမြဲအရှုပ်တွေလုပ် အဲလေ အလုပ်တွေရှုပ်နေတာပေါ့ .အမရွှေစင်လေ..
သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်ကြွေးရှင်ကို မျက်နှာမပြရဲဘူးလို့ပြောတာပဲလေ
သူလဲမူးနေပြီ....ဘာတွေသောက်လဲ မသိဘူး...ဒုဒုလေ နေနက်က
အပေါ်ပုံက ဖြိုးဝေတဲ့ ခုတလော အရမ်းအလုပ်တွေများနေတယ်ဆိုပဲ
အောက်ကပုံကတော့ ဘာသာမတူ လူမျိုးမကွဲပဲချစ်တာ ကိုယ်တို့၂ယောက်ရဲ့
အဲယောင်လို့ ကိုယ်တို့၂ကောင်ရဲ့ အပြစ်လား...
ဒီပန်းလေး ဘယ်သူ့ကို ပေးရမလဲကွယ်.....ကိုယ့်ဘ၀က အသားမဲမို့
...လရိပ်အိမ် ငယ်ရီးစားနဲ့ တူတူရိုက်ထားတာပါ...
မင်းဧရာဆိုတဲ့လူလေ အလုပ်တွေပိနေတာ...ထိုင်ဖို့ အချိန်တောင် မရှိဘူး....
ဖိုးခွားလေးအနုပညာဝါသနာပါလို့ ရင်ထဲက အစိုင်အခဲကို ဖွင့်လိုက်တာ
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ်ကတော့ DJ လုပ်မှာတဲ့ ကျွန်မ နားတွေဘာနဲ့ပိတ်ထားရမလဲ.....
တို့ ၂ ယောက်ချစ်တာအပြစ်လား......အဲဟုတ်ပါဘူး.... တို့ ၂ကောင်ပါနော်...
ကလေး ၃ ယောက်ပါလား အဲလေ ၃ ကောင်...ဖြိုးရဲ့ကလေးတွေထင်တာပဲ
အကိုငွေနဲ့ မဒမ်ငွေတို့လေ ချစ်နေကြတာ
ဒါလဲသူတို့ပဲ ဖြစ်မှာ.....ညီတွေ ညီမတွေ ရှိသေးတယ်နော်...
နေဇော်လင်းတစ်ယောက် သတင်းတွေနောက်လိုက်ရတာ လမ်းမလျှောက်
နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့.ဟိုနေ့က စကိတ်တစ်ခုပေးလိုက်ရတယ်၊ ခုတော့တော်တော်
လင်းခေတ်ဒီနို အပြင်းစားကဗျာတွေကို ကာကွယ်ဖို့လေ့ကျင့်နေပြီ၊
စစ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်း နှင့် ဟာသများ
Posted by စံပယ်ချို | Friday, July 15, 2011
၁၀ နှစ်သား ချာတိတ်က အဖေကို မေးသည်။
"ဖေဖေ စစ်ပွဲတွေ ဘယ်လိုစဖြစ်တာလဲဟင်"
"ဒီလို သားရဲ့၊ ဆိုကြပါစို့ ၊ အမေရိကန်နဲ့ အင်္ဂလိပ်တို့ နယ်မြေတစ်ခုကို
သူပိုင်တယ် ငါပိုင်တယ် ဆိုပြီး အငြင်းပွားကြတယ်"
"အင်္ဂလန်ဟာ အမေရိကန် နဲ့ အငြင်းမပွားဘူး"
"သူတို့အငြင်းပွားကြပြီလို့ ဘယ်သူပြောလို့လဲ ငါက ဥပမာ ပြောတာပါကွ"
အမေ ဖြစ်သူကအသံ ကိုမြင့်ပြီးပြောသည်။
"ရှင့် ဥပမာက ရယ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ ၊မဖြစ်နိုင်တဲ့ အတွေးကို
ကလေးခေါင်းထဲ ရှင်မရိုက်သွင်းစမ်းပါနဲ့ ရှင်"
ယောင်္ကျားကလည်း အားကျမခံ အသံကိုမြင့်ပြီး ပြန်ပြောသည်။
" ဟေ့ ၊ မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွေး ငါ က ကလေးခေါင်းထဲ ရိုက်သွင်းနေတာမဟုတ်လူးကွ"
" ရှင့် စကားကို ကလေးနားထောင်ရင် ဘယ်တော့ မှ လူတော် လူကောင်း ဖြစ်မလာဘူး"
ထိုသို့ ပြောဆို ပြီး မိန်းမက စားပွဲတင်မီးအိမ်ဖြင့် ယောင်္ကျားဘက် ပစ်ပေါက်လိုက်သည်၊
ထိုအချိန်တွင် ချာတိတ်ကကြေနပ်သံဖြင့် အော်ပြောသည်။
" ကျေးဇူးပဲ ဖေဖေ ၊ ကျေးဇူးပဲ မေမေ ၊ စစ်တွေဘယ်လိုစဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တာ် သိပါပြီ" ။
ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် ဆရာမတစ်ဦးကို တိတ်တခိုး နှစ်သက်စွဲလမ်းနေမိသည်။ တစ်နေ့တွင် အရဲစွန့်ပြီး ဆရာမကို ချစ်ကြိုက်ကြောင်း ရင်ဖွင့်ခဲ့သည်။
ဆရာမက ကျောင်းသားနှင့် ဆရာမှာ မချစ်သင့်ကြောင်း၊ မယူသင့်ကြောင်း အမျိုးမျိုးပြောဆိုဆုံးမခဲ့သော်လည်း
ကျောင်းသားက အချစ်တွင် အသက်အရွယ်၊ ရာထူးဂုဏ်သိက္ခာ မခွဲခြားကြောင်းပြောပြီး တစ်ဇွတ်ထိုး ရှေ့တိုးခဲ့သည်။
ဆရာမ............ မောင်မောင် တောင်အမေရိကားတိုက် ဘယ်မှာရှိသလဲ? မြေပုံပေါ်မှာ ထောက်ပြပါ။
မောင်မောင်...... ဒီမှာပါ ဆရာမ
ဆရာမ............ မှန်ပါတယ်.. ကဲ အားလုံး တောင်အမေရိကားတိုက်ကို ဘယ်သူတွေ့ခဲ့တာလဲ သိကြလား?
အတန်းသားများ.... သိပါတယ်.. မောင်မောင်ပါ ဆရာမ
"ဟဲလို ၊ ခင်းဗျားရဲ့ ယောက္မကြီး ကျွန်တော်မွေးထားတဲ့ မိကျောင်း ကန်ထဲ ကျသွားတယ်ဗျ"
ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်သွားကြတယ်၊ ဒါကလဲ ဇနီးဖြစ်သူဟာလ မိဘမဲ့ ဖြစ်လို့ပါကွယ်" နဲ့ချည်း အဆုံးသတ်နေတယ်၊
တီထွင်ညာဏ်ဖြင့် ဖန်တီးထားသောရေပန်းများ (ထူးဆန်းပြီးချစ်စရာကောင်းသောပုံနှင့်တကွ)
Posted by စံပယ်ချို | Thursday, July 14, 2011
ထူးထူးဆန်းဆန်း လေးများကိုစိတ်ဝင်စားစွာ အားပေးနေသော
jasmine စာဖတ်သူများအားလုံးအတွက် အင်တာနက် မှ ရှာရှာဖွေဖွေ တင်ပြပေးပါသည်။
အမှန်တစ်ကယ်တော့( ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ပါနော် )
အပိုင်း ၂ ကိုတင်ဖို့ပါရှင်.....ပုံများပြောက်ဆုံးခြင်းကြောင့် ရေပန်းပုံလေးကိုတင်လိုက်ရတာပါ။ ။
Posted by စံပယ်ချို | Wednesday, July 13, 2011
ထီးမလိုဘူး......ရှင့်နားရွက်လေးရှိရင် ကျွန်မဘ၀ အေးမြနေပါတယ်....
မောင်(စွယ်စုံကြမ်း)တစ်ခါတစ်လေ ဒီလိုပဲ...သောက်လိုက် ကြည့်လိုက်...ဘာကားမှန်းတော့မသိဘူး။
အလွမ်းအဖွဲ့ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ ညီမလေး လှိုင်ပေါ့...ဘယ်သူကိုလွမ်းနေတာလဲတော့ မသိဘူး။
သေချာပါတယ် jasmine ဆိုတာ ပြောလိုက်ရင်မအားဘူး...
ဒီပုံကတော့လရိပ်အိမ်ပါပဲရှင် အိမ်မက်ထဲမှာ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့တွေ့နေသလိုပဲ။
နူးညံ့စွာ အရှုံးပေးပါပြီ အချစ်ရေ.....
mail မှသူငယ်ချင်းပို့ပေးသောပုံများကို ကျွန်မစာရေးပြီးဖော်ပြပါသည်.....
ဒီနေ့ ပုံအားလုံးတင်ရန် အခက်အခဲရှိသောကြောင့် နောက်ရက်ဆက်ရန်ရှိပါသည်......
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ။
တီထွင်ညာဏ်ဖြင့် ဖန်တီးထားသောရေပန်းများ (ထူးဆန်းပြီ...
ဒါလေးဖတ်ပြီး အသက်ရှည်ပါ..... (ဟာသ) ၂